Aingam-panahy: Tom Peters | Martech Zone
Aingam-panahy: Tom Peters
Alarobia, Septambra 13, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Andro ratsy ny andro. Nijery herinandro mafy aho. Mety efa iray volana izay. Nila aingam-panahy aho. Androany dia nandinika sary vitsivitsy aho avy eo Tom Peters, ireto misy toerana tena tianao zaraina:
Raha tsy tianao ny miova dia tsy tianao ny tsy fitoviana na dia kely aza. - Jeneraly Eric Shinseki, Lehiben'ny mpiasa. Tafika amerikana
Ny fikatsahana hatrany ny fanavaozana ihany no ahazoana antoka ny fahombiazana maharitra. - Daniel Muzyka, Dean, Sekolin'ny orinasa Sauder, Univ an'ny British Columbia (FT / 2004)
Avelao ireo jaky vaky hazavana - Tom Peters
Mila fampidiran-talenta goavana ny orinasantsika, ary ny talenta, inoako, dia azo inoana fa hita eo amin'ireo tsy mpifanaraka, mpanohitra ary mpikomy. - David Ogilvy
Te ho anisan'ny zavatra lehibe kokoa noho izy ireo ny olona. Tian'izy ireo ny ho anisan'ny zavatra tena reharehany, izay hiadiany, sorona ho an'ny, fitokisana. - Howard Schultz, Starbucks (IBD / 09.05)
Raha toa voafehy ny raharaha dia tsy mandeha haingana fotsiny ianao. - Mario Andretti
Ny dingana voalohany amin'ny â ?? dramaâ ?? Mazava ho azy ny programa fanovana eo amin'ny fikambanana ?? fiovan'ny tena manokana! - RG
Afaka mihambo ho mikarakara ny vatana iray, saingy tsy afaka mody eo izy ireo? - Texas Bix Bender
Sivapolo isanjaton'ilay antsointsika hoe «fitantanana» ?? dia ahitana ny fanasarotana ny olona hamita zavatra. â ?? Peter Drucker
Ny fanatanterahana dia dingana tsy miova amin'ny dinika fatratra momba ny fomba sy inona, fanarahana tsara, ary fiantohana ny fandraisana andraikitra. - Larry Bossidy & Ram Charan / Fanatanterahana: Ny fifehezana ny zavatra atao
Ireo mpamorona rindrambaiko ambony dia mamokatra kokoa noho ny mpamorona rindrambaiko antonony tsy amin'ny 10X na 100X, na 1,000X akory, fa 10,000X. - Nathan Myhrvold, Chief Scientist taloha, Microsoft
Ary ny tiako indrindra:
Omeo ny mpiasanao isaky ny mahita fahombiazana, ary raha tsy mahomby izy ireo dia omeo fotoana hahombiazana any an-kafa. Indraindray izany dia midika fandroahana azy ireo. - Tsy tadidiko hoe iza no nilaza tamiko an'io, saingy nifikitra tamiko io.
Manantena aho fa afaka mandeha manodidina ny tontolo andro fotsiny, ary mamerimberina hatrany hatrany…. ary manantena fa olona iray farafaharatsiny mihaino.
Fanatanjahan-tena amin'ny atidoha - ary momba an'i Doug kely
Ady amin'ny varavarankely… Toerana, Toerana, Toerana
Sep 14, 2006 amin'ny 9: 18 AM
Ny tenin'i Peter Drucker no tiako indrindra, lahatsoratra tsara Doug.
Sep 14, 2006 ao amin'ny 1: PM PM
Eeps, manantena aho fa tsy nanao ratsy ny herinandronao, angamba nanelingelina ahy ny eritreritrao?
Ny tiako indrindra angamba dia ny hoe: “Avelao hisava ny mazava ireo olona vaky” - Tom Peters, satria azo antoka fa olona triatra aho. Manaraka akaiky izany dia ny tenin'ny Mario Andretti, satria tena mila mihaino an'io aho fa tsy hitandrina. Farany, tiako, "Ny dingana voalohany amin'ny â ?? dramatsyâ ?? Mazava ny programa fanovana eo amin'ny fikambanana? fanovana manokana ataon'ny tena manokana! ” - RG, na dia henoko fehezanteny tsara kokoa momba izany aza, toy ny famaritana hoe "Raha te-handresy an'izao tontolo izao ianao, dia mila mandresy ny tenanao" ary mizotra mankany amin'ny olona tsirairay, fa ao anatin'ny olona iray, ny fiasa dia miakatra amin'ny rafitra sosialy-toekarena ao amin'ny fiarahamonina ”. Ireto indray dia ireo paraphrases, ny voalohany azo avy amin'ny Art of War, farafaharatsiny avy amin'ny filozofa atsinanana heveriko; ny faharoa, minoa na tsia, avy amin'i Joseph Bueys, iray amin'ireo mpanakanto tiako indrindra, mavitrika amin'ny taona 60 sy 70.
Ary iza no RG?
Sep 14, 2006 ao amin'ny 6: PM PM
Fahafinaretana ny miresaka aminao. Tsy misy ifandraisany amin'ny bilaogiko ny fotoan-tsarotra ato amiko, io no fivoahako!
Tsy azoko antoka hoe iza ny RG… loharanom-pahalalana tamin'ny iray tamin'ireo famelabelaran'i Tom Peter io.
Miombon-kevitra aminao aho ary tiako fa ny teny nalaina rehetra dia mitaky olona iray handray andraikitra amin'ilay zavatra tokana ananany fifehezana amin'ny fanovana = ny tenany!